Lakulan – Ninka badbaadiyay nolosha 700 Eeyo ah. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka September 17, 2017	0 270 Views
Beijing (Himilonetwork) – Zhou Yusong waxaa looga yaqaan ‘Ilaaliyaha Eeyaha’ magaaladiisa Zhengzhou, gobalka Henan ee dalka Shiinaha. Qalbi-nuglahan wuxuu 8 sano oo cimrigiisa kamid ah ku bixinayaa badbaadinta eeyaha laga danaystay – isaga oo gabaad iyo gargaarba ugu fidiya hoygiisa.
Previous: Bisadda ugu seynta dheer bisad-weynta caalamka.
Next: Lakulan – Haweeney aan Raashiin cunin muddo 60 sano.